The Myanmar Dollar Information – Telegram
The Myanmar Dollar Information
3.1K views 01:48
3.3K viewsedited 01:51
The Myanmar Dollar Information pinned «မြန်မာသတင်းအချက်အလက်များ https://t.me/myd_info/58 English Information: https://t.me/myd_info/57 https://play.google.com/store/apps/details?id=money.myd.mydwallet https://t.me/myd_airdrop_bot»
The Myanmar Dollar Information pinned «မင်္ဂလာပါ၊ မြန်မာဒေါ်လာစျေးစီမံကိန်းကိုကြိုဆိုပါသည်။ 🇲🇲💵 မြန်မာပြည်သူများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရပြီးခေတ်မီသောဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရည်မှန်းထားပါသည်။ အကျင့်ပျက်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိသောမြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီကိုအထောက်အပံ့မပြုသောငွေကြေးဖြစ်သည်။…»
The Myanmar Dollar Information pinned «Hello and welcome to the Myanmar Dollar project. 🇲🇲💵 It’s our mission to provideanew, secure and modern digital currency to Myanmar people. A currency which isn’t controlled by the corrupt military, and supports democracy in Myanmar. 🗽 Myanmar Dollars…»
Welcome to the MYD project, to help you get started we put together this guide to introduce you to digital currencies. Also know as Cryptocurrencies.
Cryptocurrencies are digital assets designed to facilitate person-to-person financial transactions and smart contracts on the internet inadecentralized manner. This is accomplished by using advanced cryptography and programming.
Here areafew terms which are useful to understand how both MYD and other currencies work.
Cryptocurrencies record transactions on public ledgers known as “blockchains” and are the first form of digital money where an intermediary (likeabank) is not required to send funds from one person to another person. This helps makes them censorship resistant.
Cryptocurrencies do not haveaphysical location; wallets do not hold cryptocurrencies. Wallets only hold the cryptographic keys or seed needed to access your cryptocurrencies on the relevant blockchain. If you delete your wallet, you can reclaim it as long as you have your key or seed saved.
Some cryptocurrencies run on top of other blockchains, requiring transactions fees in that blockchain. These often referred to as "tokens". Some common ones are ERC20 or BEP20 and there are many airdrops for them. MYD is notatoken, it runs on its own blockchain which is how we can provide fee less translations.
Due to blockchains being public, cryptocurrencies are only pseudo-anonymous. A common goal for many cryptocurrencies is to improve privacy for clients, though only some cryptocurrencies make this their main focus (Monero, Zcash). MYD is pseudo-anonymous.
Most crypto currencies require multiple confirmations to prevent double spending which can occur in some rare circumstances. However MYD does not have this issue as the network automatically confirms within 0.65 seconds.
Cryptocurrencies areadistributed financial ledger that is shared all over the world. The most famous examples of cryptocurrencies are Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH), but there are countless others such as Myanmar Dollars (MYD), our cryptocurrency founded to promote democracy and freedom in Myanmar.
အားလုံးကို MYD project မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်, Cryptocurrencies အ​ကြောင်းနားမလည် သူများအတွက် ဒီ guide ​လေးကို ​ရေး​​ပေးထားပါတယ်။
Cryptocurrencies ဟာ digital assets လို့​ခေါ်တဲ့ internet ​ပေါ်မှာ ထားရှိ တဲ့ ထိန်းချုပ် လို့မရနိုင်တဲ့ ​ငွေတစ်မျိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို Cryptocurrencies ​တွေဖြစ်လာ​အောင် အဆင့်မြင့် cryptography နဲ့ programming တို့ကိုအသုံးပြုရပါတယ်။
အောက်မှာ​​ဖော် ပြထားတဲ့ အသုံး အနှုံ ​တွေက​တော့ MYD နဲ့ အခြား​သော Cryptocurrencies ​တွေဘယ်လိုအ လုပ်လုပ်လဲ ဆိုတာ ကို ရှင်း ပြတဲ့ အချိန် မှာ အသုံးပြု မဲ့ အသုံးအနှုံ ​တွေပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
Cryptocurrencies ​တွေရဲ့ public ledgers ​တွေအ​ပေါ်မှာထားရှိတဲ့ ​ငွေလွှဲ၊​ငွေသွင်း၊​ငွေထုတ်မှတ်တမ်း ကို “blockchains” လို့​ခေါ်ပါတယ်။
Blockchains ​တွေဟာ digital ပိုက်ဆံ ​တွေရဲ့ ပထမ ဦး ဆုံးပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် digital ပိုက်ဆံ ဟာ တစ်ဦး မှ တစ်ဦး ​ငွေလွှဲ လိုလျင် ဘဏ်ကဲ့သို့ ​သော ကြားခံ မလိုအပ်ပါ။ ကြားခံ မလိုအပ် တဲ့ အတွက် ​ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ​ငွေ​တွေကို စစ်​ကောင်စီ ကလုပ် သလိုမျို ထိမ်းချုပ်လို့ မရပါဘူး။
Cryptocurrencies ​တွေဟာထိ​တွေ့လို့ရတဲ့အရာ​တွေမဟုတ်ပါဘူး။ Wallets သို့မဟုတ် ပိုက်ဆံအိတ် ​တွေ မှာ cryptocurrencies ​တွေ မရှိပါဘူး။ Wallets (ပိုက်ဆံအိတ်) ​တွေမှာ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ cryptocurrencies ​တွေကို ၀င်​ရောက်အသုံးပြုရန် လိုအပ် တဲ့ cryptographic keys ဒါမှမဟုတ် seed များသာပါရှိပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ wallet ကိုဖြတ် မိတာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ခဲ့ ရင် key ဒါမှမဟုတ်seed မှတစ်ဆင့်လူကြီးမင်း တို့
Cryptocurrencies ​တွေဟာလူကြီးမင်းတို့ ​ငွေလွှဲ တာ သို့မဟုတ်​ငွေလက်ခံ တာ​တွေ ပြုလုပ် ချိန်မှာ ရတစ်ကယ် ရွေ့မသွားပါဘူး။ လူကြီးမင်းလွှဲလိုက်တဲ့ Cryptocurrencies ဟာသူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ blockchain ​ပေါ်မှာ ပိုင်ရှင်ပဲ​ပြောင်းသွားတာပါ။ Cryptocurrencies ​တွေကို ကမ္ဘာအနှံ့အပြား မှာရှိတဲ့ nodes ​တွေမှာသိမ်းထားပြီး cryptography ဖြင့်လုံခြုံ​အောင် ထားရှိ ထားပါတယ်။
လိုအပ်တယ့်ပစ္စည်း အလုံအ​လောက်ရှိ တယ့် မည်သူမဆို Nodes ​တွေကို တည်​ဆောက်နိုင်ပါတယ်။
cryptocurrencies တစ်ချိုဟာ ကိုယ်ပိုင်blockchains မရှိပဲအခြား blockchains ​တွေ​ပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်, အဲ့လိုလုပ်တဲ့ အချိန်မှာ လွှဲ​ပြောင်းခ (transactions fees) ​တွေကို ထို blockchain မှာလိုပါတယ်. အဲ့ဒီလွှဲ​ပြောင်းခကို "tokens" လို့​ခေါ်ပါတယ်။
လူသိများတဲ့ Token အချိုက​တော့ ERC20 တို့ BEP20 ပါ။ အဲ့ဒီ Token ​တွေအတွက် airdrops များစွာရှိပါတယ်။ MYD က​တော့ token မဟုတ်ပါဘူး။ MYD မှာကိုယ်ပိုင် blockchain ရှိတဲ့အတွက်​ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့​ငွေလွှဲ တာ​တွေကို အခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
blockchains ​တွေကို လူတိုင်း ၀င်​ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ထို့​ကြောင့် cryptocurrencies ဟာလူကြီးမင်းတို့ကို privacy အပြည့်အ၀​ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ cryptocurrencies ​တော်​တော်များများ ဟာ အသုံးပြုသူ​တွေရဲ့ ကိုယ်​ရေးအချက်အလက်​တွေကို လုံခြုံစွာ ထိမ်းသိမ်းနိုင်ဖို့
ကြိုစား​နေကြပါတယ်။ ဒါ​ပေမယ့် အချို ​သော cryptocurrencies ​တွေကသာ privacy ကိုအဓိကထား တာကို​တွေ့ရမှာပါ။ ဥပမာ(Monero, Zcash). ထို့​ကြောင့် MYD သည်လည်း သာမန် cryptocurrencies ​တွေ​လောက်သာ privacy ကိုထိမ်းသိမ်း ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
crypto currencies ​တော်​တော်များများဟာ ​ငွေကိုနှစ်ခါသုံးလို့မရ​အောင် စစ်ချက်​ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ကြပါတယ်။ MYD ရဲ့မြန်ဆန်တဲ့ ကွန်ရက် က စစ်​ဆေးချက်​ပေါင်းများစွာ ကိုပြုလုပ်စရာ မလို​အောင် လုပ်​ပေးထားတာဖြစ် ပြီး လိုအပ်တယ့် စစ်​ဆေးချက် ​တွေကိုလည်း MYD network က 0.65 seconds အတွင်းမှာအလိုအ​လျောက် ပြုလုပ်​ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Cryptocurrencies ​တွေဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ ဖြန့်ဖြူးပြီးဖြစ်တယ့် financial ledger ပဲဖြစ်ပါတယ်။နာမည် အကြီးဆုံး cryptocurrencies နှစ်ခုက​တော့ Bitcoin (BTC) နဲ့ Ethereum (ETH) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ​ပေမဲ့ MYD ကဲ့သို့​သော Cryptocurrencies ​အ​သေး​လေး​တွေများစွာလဲ ရှိပါတယ်။ Myanmar Dollars (MYD) နဲ့ အခြား cryptocurrency ​တွေရဲ့ကွာခြားချက် က​တော့ MYD ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဓိကထား တည်​ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အကြိုအမြတ်ရယူဖို့တည်​ထောင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။
Now you understandalittle about how cryptocurrencies work from our learn-crypto channel, let’s cover what MYD is and how it works.
What are Myanmar Dollars?
Myanmar Dollars (MYD) isasoftware designed to facilitate fee-free digital transactions. It is forked from the Nano cryptocurrency, but is only being distributed to Myanmar.
Key to MYD’s design is that each account has its own blockchain that only the owner can update. To makeatransaction, an account owner signsatransaction that updates their own ledger, and broadcasts it out to the MYD network. When MYD nodes see enough confirmations to validate the transaction, they all independently deem the transaction as irreversible, updating their copy of the ledger.
In this way, MYD’s design isadeparture from other cryptocurrencies, as its blockchain does not keepafull record of its transactions. Instead, the MYD blockchain tracks account balances and their associated transaction amounts.
MYD does away with these traditional aspects of blockchain design. Instead, nodes vote on who gets to create blocks, and since this can occur at low to no cost, users don’t need to pay to have transactions included in the MYD blockchain.
The idea is that these design trade-offs will encourage more transactions to be made on MYD, leading to greater adoption of the MYD cryptocurrency in use cases requiring large volumes, such as serving all of Myanmar.
So far, the MYD project keepsarecord of its distribution via its block explorer, and has published its project roadmap and aims on Facebook.
Who created MYD?
MYD was forked from Nano byatechnical team from multiple nationalities who believeadigital currency will provideabrighter future for Myanmar.
After launchanumber of Myanmar based community managers volunteered to assist in running the project, which is who most users interact with on our various channels.
How does MYD work?
Like all cryptocurrencies, MYD usesaconsensus algorithm to ensure its network of nodes stays in sync to prevent users from breaking its software rules. More specifically, MYD usesavariation of delegated proof-of-stake (DPoS) called Open Representative Voting.
MYD’s usesakey innovation called the Block Lattice. This isanew type of data architecture originally pioneered by Nano.
Transactions on MYD occur when:
• The sender publishesablock debiting their account for the amount to be sent
3.0K views 08:25
• The receiver publishesamatching block charging their own account.
Each block in MYD also containsasmall proof-of-work component used to discourage spam transactions. This is done to prevent users from continuously sending transactions.
Why does MYD have value?
MYD shares many of the characteristics that give all cryptocurrencies value, including durability, portability and scarcity. The maximum supply of MYD is 110,000,000,000 MYD (100 billion).
In 2021 the MYD project began distributing 60.5 billion MYD to Myanmar citizens via an Airdrop verified by Myanmar’s phone prefix. This was done completely free of charge.
A further 27.5 billion was reserved for the legitimate National Unity Government to support Democracy in Myanmar.
Lastly 22 billion was reserved inahumanitarian fund to distribute to charity organisations, support infrastructure development and distribute to Myanmar citizens who were not able to take part in the Airdrop due to internet restrictions.
During this time around 230 billion MYD were removed from circulation by being sent to an address withaprivate key that has been destroyed.
This means no MYD coins can be minted by the protocol,apossible feature for investors, who can be assured they are buyingafinite good.
This means that once MYD is fully distributed, it is final, so we recommend claiming your while you can!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ crypto post ကနေ cryptocurrencies ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာ လူကြီးမင်းတို့နည်းနည်းနားလည်သဘောပေါက်ဘောက်ကြပီထင်ပါတယ်။ MYD သည်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန်ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
Myanmar Dollars (MYD) သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်အရောင်းအ၀ယ်များကိုအခကြေးငွေပေးစရာမလိုသည့် software တစ်ခုဖြစ်သည်။ Nano cryptocurrency မှချိတ်ဆက်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းကိုပဲဖြန့်ဝေပါတယ်။
MYD ဒီဇိုင်း၏သော့ချက်မှာ အကောင့်တစ်ခုစီကိုယ်ပိုင် blockchain ရှိပီး ပိုင်ရှင်ကသာ update လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ငွေပေးငွေယူပြုလုပ်ရန် အကောင့်ပိုင်ရှင်လက်မှတ်ထိုးပီး စာရင်းကိုupdate လုပ်ပါတယ်။MYD node များမှငွေပေးငွေယူကိုအတည်ပြုရန်လုံလောက်သောအတည်ပြုချက်ကိုတွေ့သောအခါ ၎င်းတို့၏copy ပြုလုပ်ထားတဲ့ စာရင်းကို update လုပ်ပါတယ်။ပြန်ပြင်လို့မရပါ။ MYD နှင့်အခြားသော cryptocurrencies တွေရဲ့ကွာခြားချက်ကတော့ MYD ရဲ့ blockchain ကငွေပေးငွေယူ transaction တစ်ခုလုံးကို record မလုပ်ထားပါဘူး။အဲဒီအစား MYD blockchain သည်ငွေလက်ကျန်စာရင်းနှင့်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောငွေပေးငွေယူပမာဏကိုခြေရာခံလို့ရပါတယ်။
အဲဒီအချက်က Bitcoin (BTC) ,Ethereum (ETH) နှင့်အခြား cryptocurrencies တို့နဲ့ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ BTC,Ethereum နှင့်အခြားသော currencies တွေမှာ transactions အားလုံးကို record လုပ်ပီး block အဖြစ်အရောင်းအ၀ယ်အားလုံးကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်ခွဲခြားထားပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောစနစ်များတွင် အရောင်းအ၀ယ်များသည် block တစ်ခုတွင်ပါဝင်ရန်လေလံဆွဲပီး block အသစ်ဖန်တီးသူများက nodes တွေကိုအခကြေးငွေများနှင့်ဖြန့်ဝေကြပါတယ်။
ရည်ရွယ်ချက်မှာ node များသည်လုပ်ကွက်များဖန်တီးပိုင်ခွင့်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အရင်းအမြစ်များကိုဖြုန်းတီးရမည်ဖြစ်သောကြောင့်အခွန်အခများသည်ဤ blockchains များ၏ဆက်လက်လည်ပတ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မည်။
MYD ကအဲဒီလို blockchain ဒီဇိုင်းတွေလိုမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအစား ဘယ်သူက blocks တွေကိုဖန်တီးခွင့်ရမလဲဆိုတာ nodes တွေဆုံးဖြတ်ပေးသွားပါမယ်။ ၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးကုန်ကျစရိတ် နည်းသောကြောင့်သုံးစွဲသူများသည် MYD blockchain တွင်အရောင်းအ၀ယ်များပြုလုပ်ရာတွင်အခကြေးငွေပေးစရာမလိုပါ။
MYD design idea ကတော့ အခကြေးငွေပေးစရာမလိုခြင်းဖြင့်MYDတွင် အရောင်းအဝယ်များပြုလုပ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးအတွက် ၀န်ဆောင်မှုကဲ့သို့သောကြီးမားသောပမာဏများလိုအပ်သည့်အသုံးပြုမှုကိစ္စများတွင် MYD cryptocurrency ကိုပိုမိုလက်ခံလာစေနိုင်သည်။
ယခုအချိန်အထိ MYD စီမံကိန်းသည်၎င်း၏block explorerမှတစ်ဆင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းမှတ်တမ်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီး၎င်း၏စီမံကိန်းအတွက်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုအသုံးပြုသွားပါမယ်။
MYD ကို Nano မှနိုင်ငံအနှံ့မှနည်းပညာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့ပြီးဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးသည်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပိုမိုတောက်ပသောအနာဂတ်ကိုပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါတယ်။
စတင်ပြီးသည့်နောက် မြန်မာအခြေစိုက်မန်နေဂျာအတော်များများသည်စီမံကိန်းကိုကူညီရန်စေတနာ့ ၀န်ထမ်းများဖြစ်ကြတယ်။ ၎င်းမှာအသုံးပြုသူအများစုသည်ဆက်သွယ်မှုအမျိုးမျိုးဖြင့်ဆက်သွယ်ကြသည်။
5.7K views 08:25
အခြားသော cryptocurrencies ကဲ့သို့ပင် MYDသည်အသုံးပြုသူများ၎င်း၏ software rules များကိုချိုးဖောက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် node များကွန်ယက်သည်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်မှုရှိစေရန် consensus algorithm ကိုအသုံးပြုသည်။ ပို၍ တိကျစွာပြောရလျှင် MYD သည်ပွင့်လင်းကိုယ်စားပြုမဲပေးခြင်းဟုခေါ်သော လွှဲအပ်ထားသောသက်သေအထောက်အထား (DPoS) ကိုအသုံးပြုသည်။
ဤစနစ်အရ nodesများသည် သူတို့၏အကောင့်လက်ကျန်ပေါ် မူတည်၍“ voting weight” ကိုသတ်မှတ်ပါတယ်။ ထို့နောက်၎င်းတို့သည်မဲများကို အသုံးပြုမည် သို့မဟုတ် ကွန်ယက်ရှိအခြား node တစ်ခုသို့ခွဲဝေရန်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
node တစ်ခုသည် လုံလောက်သော voting weight ရှိပါက, Principal representative အဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်၎င်း၏အကောင့်အတွက်ရန်ပုံငွေများနှင့်ခွဲဝေသူတို့အားအချိုးကျအချိုးအစားအပေါ်မဲပေးနိုင်ပါတယ်။
မည်သည့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုနှင့်မည်သည့် block ကိုလက်ခံသင့်သည်ဆိုသောမဲပေးခွင့်ကိုကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့်ပေးစရာမလိုပါ။
Block Lattice ဆိုတာဘာလဲ။
MYD's သည် Block Lattice ဟုခေါ်သောသော့ချက်ကျသောတီထွင်မှုကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ၎င်းသည်ဒေတာဗိသုကာပုံစံအသစ်တစ်ခုကိုမူလက Nano မှစတင်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုဒီဇိုင်းအရ၊ အကောင့်တစ်ခုစီတွင်ကိုယ်ပိုင် blockchain ရှိသည်၊ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများကိုစောင့်ဆိုင်းစရာမလိုဘဲချက်ချင်း update ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ထို blockchains များကို“ account-chains” ဟုခေါ်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်နှင့်ဆင်တူပါတယ် block တစ်ခုချင်းစီကို records လုပ်ပီး account တွေကို updates လုပ်ပါတယ် ထို့ကြောင့်ငွေပေးငွေယူပမာဏကို consecutive blocks နဲ့အကောင့်လက်ကျန်ငွေ၏ကွာခြားချက်အဖြစ်မှတ်ယူသည်။
ငွေပေးငွေယူတစ်ခုချင်းစီသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် block တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူများသည်network တစ်ခုလုံးကိုအသုံးမပြုဘဲ blocksများကို update နှင့် ပေးပို့ခြင်းများလုပ်ဆောင်နိုနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်အကောင့်ပိုင်ရှင်များသာသူတို့၏ blockchain ကို modify လုပ်နိုင်ပါတယ်။
MYD ၏အရောင်းအ၀ယ်များသည် -
MYD ရှိ block တစ်ခုစီတွင် spam အရောင်းအ၀ယ်ကိုဟန့်တားရန်အသုံးပြုသောသေးငယ်သည့် proof-of-work အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းပါရှိသည်။ အသုံးပြုသူမျာကို အရောင်းအဝယ်များအားအဆက်မပြတ်ပေးပို့ခြင်းမှကာကွယ်ရန်လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
MYD သည် cryptocurrencies အားလုံး၏ကြာရှည်ခံမှု၊ သယ်ဆောင်နိုင်မှုနှင့်ရှားပါးမှုစသောတန်ဖိုးများကိုပေးသောထူးခြားသောလက္ခဏာများကိုမျှဝေထားသည်။ MYD ကိုအများဆုံးထောက်ပံ့နိုင်မှုမှာ ၁၁၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ MYD (ဘီလီယံ ၁၀၀) ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် MYD စီမံကိန်းသည် MYD သန်း ၆၀.၅ ဘီလီယံကိုမြန်မာပြည်သူလူထုသို့ Airdrop မှတစ်ဆင့် ဖြန်ဝေပါတယ် ဒါကလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ၂၇.၅ ဘီလီယံကိုမြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီကိုထောက်ပံ့ရန်တရားဝင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG)အတွက်လျာထားပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ၂၂ ဘီလီယံကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာရန်ပုံငွေဖြင့်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများသို့ဖြန့်ဝေရန်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အပံ့ပေးရန်နှင့်အင်တာနက်ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် Airdrop တွင်မပါ ၀ င်နိုင်သည့်မြန်မာပြည်သူများကိုဖြန့်ဝေရန်ဖြစ်ပါတယ်။
10.5K viewsedited 08:25
Learn Crypto Guide:
Cryptocurrencies are digital assets designed to facilitate person-to-person financial transactions and…
7.0K views 00:47
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြိုင်ပွဲအသစ်လေးကို ကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲဟာ MYD အသုံးပြုသူအသစ်တွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းမှာ MYD အကြောင်း အာရုံစိုက်မှု များပြားလာအောင် ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
MYD ရောင်စုံ sticker များ နှင့် MYD အဖြူအမည်း လက်ကမ်းစာစောင်များကို ပုံနှိပ်ရန် အတွက်‌ လိုအပ်မည့် စာရွက်စာတမ်းများကို အောက်ဖော်ပြပါ links များတွင် တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့က ဒါတွေကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေစေချင်ပါတယ်။ လက်ကမ်းစာစောင်တွေဖန်တီးခြင်း စတစ်ကာတွေကို ဖြတ်ညှပ်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ ဖြန့်ဝေလို့ ရမယ်ဆိုရင် မြို့အနှံ့ စတင်ဖြန့်ဝေပေးကြပါ။
သင် ကိုယ်တိုင် လမ်းထဲရှိ အခြားသူများကို MYD လက်ကမ်းစာစောင်တွေ ဝေငှပေးနေတဲ့ ဗီဒီယို (သင့်မျက်နှာ ပြစရာ မလိုပါ) ကို တင်ပြခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က သင့်ကို 3000 MYD ဆုချီးမြှင့်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်ဟာ မြို့အနှံ့မှာရှိတဲ့ အဆောက်အဦးတွေ၊ ငွေထုတ်စက်တွေ၊ တယ်လီဖုန်းနဲ့ လမ်းမီးတိုင်တွေမှာ MYD stickers ကပ်ထားခဲ့တဲ့ ပုံတွေကို ပြနိုင်ခဲ့မယ်။ အဆိုပါပုံတွေကို Facebook မှာ public နဲ့တင်ပြီး မျှဝေခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြတဲ့ သင်ကပ်ခဲ့တဲ့ stickers တစ်ခုစီတိုင်းကို 100 MYDစီ ဆုချီးမြှင့်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ငွေကြေးအရ နှိုငိးယှဉ်ရင် sticker sheet တစ်ခုဟာ 2400 MYD ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။
လူတိုင်းက တစ်ရက်မှာ Video 1ခု နဲ့ Stickers 24ခုပါတစ်စုံ ကိုသာ တင်ပြဖို့အတွက် ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
ဒီပြိုင်ပွဲက သင်ကိုယ်တိုင် အမှန်တကယ်အပြင်ထွက်ပြီး ပါဝင်ရတာဖြစ်လို့ ကျေးဇူးပြုပြီး လုံခြုံအောင်နေဖို့ သတိရပါ။ ရဲ နဲ့ စစ်သားတွေရှေ့မှာ လုံးဝ မလုပ်မိပါစေနဲ့။ တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ပါ။
ဒီပြိုင်ပွဲကို အတင်းအကြပ်ပါဝင်စေဖို့ ဖိအားမပေးထားဘူးဆိုတာကို သတိပြုပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး သင်လုံခြုံမယ်လို့ ခံစားရမှသာ ပါဝင်စေလိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က MYD ကို တတ်သနိုင်မျှ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပျံ့နှံ့စေချင်တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိအရှိဆုံး ပြိုင်ပွဲဝင်မယ့် အသုံးပြုသူများကို အမြင့်ဆုံးသော ဆုကြေးတွေကို ချီးမြှင့်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တင်ပြခြင်းကို Discord ရှိ #sticker-competitions channel တွင် သော်လည်းကောင်း Telegram ရှိ MYD Events channel ၏ stick announcement post တွင် reply ပြန်ခြင်းအားဖြင့် သော်လည်းကောင်း Facebook ရှိ announcement post အောက်တွင် comment ပေးခြင်းဖြင့်လည်း တင်သွင်းလို့ရပါတယ်။ ဖော်ပြပါ social media platforms များအနက်မှ တစ်ခုတည်းတွင်သာ တင်ပြရမည်ဖြစ်သည် မဟုတ်ပါက ပျက်ချရပါလိမ့်မည်။
- MYD wallet address
- သင်ရိုက်ထားတဲ့ Video ဒါမှမဟုတ် stickers ပုံတွေစုပြီး တင်ထားတဲ့ Facebook post link…
- Facebook post တွင်လည်း အောက်ပါ hashtags များပါဝင်ရမည်…
(#FixTheMoneyFixMyanmar #TheMyanmarDollar #MYD #crypto)
Hello everyone. Today we are announcing our newest MYD Competition, which will help bring in new users and spread MYD awareness in communities. In the links below you can find documents to print bothablack and white MYD leaflet, and MYD coloured stickers.
We want you to print these out, create leaflets and cut out stickers and start spreading them over town when it is safe to do so. If you uploadavideo of yourself handing out MYD leaflets in the street or posting through doors (no need to show your face) to multiple people we will award you 3000 MYD.
If you upload an image gallery of MYD stickers stuck all overtown, on buildings, on cash machines, on telephone and electrical posts and upload them inapublic Facebook post that you share with us, we will award 100 MYD for each sticker you show us you’ve stuck. That’s around 2400 MYD for each sticker sheet. This will be limited to 1 video and 1 set 24 stickers for each person each day.
As this event involves you going out into the real world, please remember to stay safe. Don’t do it in front of police or soldiers, try to be as discrete as possible.
Remember no one is forcing you to take part in this event, please only do so if you feel safe. But we do want to reward our bravest users with the highest rewards as we want to spread MYD as far and wide as possible.
Submission can be posted either on Discord in #sticker-competition channel, Telegram asareply to the stick announcement post in the MYDEvents channel or on Facebook asacomment under the announcement post. Multiple entries across platforms will be disqualified.
- MYD Address
- Facebook link to video or sticker gallery post.
- The Facebook post must contain all the hashtags:
#FixTheMoneyFixMyanmar #TheMyanmarDollar #MYD #crypto
Join the The Myanmar Dollar Discord Server!
Check out the The Myanmar Dollar community on Discord - hang out with 4,660 other members and enjoy free voice and text chat.
3.8K views 11:29
Channel name was changed to «The Myanmar Dollar Information»
To clarify the additional rules for the sticker competition:
- Leave all stickers up. Never take them down or reuse them.
- protect stickers with tape on top so they don’t get destroyed by the rain.
- don’t stick on wet surfaces, only on dry.
- put on flat or curved even surfaces, not bumpy where it will fall off.
- put in public places like bus stops, train stations, near shops and in markets
- Leave people withaleaflet, don’t show them and then take it away. Let them keep it to read later.
3.4K views 02:26
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ..... ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ ကြေငြာချက်တစ်ခု ထုတ်ပြန်ဖို့ ရှိပါတယ်။MYD စု‌နေတဲ့လူ တိုင်းကို ဆုချီးမြှင့်ဖို့ အတွက် ''MYD ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအတွက် ဆုလာဘ် "အစီအစဉ် ကို ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
မိတ်ဆွေ၏ အကောင့်လက်ကျန်ငွေ ကို အခြေခံ ၍ မိတ်ဆွေ ဤအစီအစဉ် ကနေ လစဥ် 1% MYD အပိုရ‌ နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ မိတ်ဆွေစုဆောင်းထားတဲ့ MYD ကနေ နှစ်စဉ် အတိုး 12% ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ လအကုန်မှာ လုပ်မယ့် "MYD ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း" ဖွင့်ပွဲ အစီအစဥ်မှာပါဝင်တဲ့ တစ်ဦးချင်းစီကို MYD ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ပထမဆုံးလ အနေနဲ့ အပိုဆုအဖြစ် အတိုးဆုငွေ 3% တစ်ကြိမ် ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
MYD ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း အစီအစဉ်မှာ active ဖြစ်ပီးသား MYD အကောင့်ဖြင့် ပါဝင်သော လူတိုင်းကို တစ်လလျှင် တစ်ကြိမ် 1ရက် နေ့တိုင်းတွင် အတိုးငွေ ပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ဖို့ သင် လုပ်ရမှာကတော့ ဆုမပေးခင် တစ်ပတ်အလိုမှာ သင်၏ အကောင့်ကို active အကောင့် အဖြစ် အမှတ်အသားပြုလုပ်ရန် အောက်ပါ address ကို 1MYD ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်2ရက်နေ့မှ လမကုန်ခင်ကြား ကြိုက်တဲ့အချိန်၌ 1 MYD ပို့ရုံနဲ့ စာရင်းသွင်းလို့ရပါတယ်။ဒါမှသာလျှင် ကျုပ်တို့အနေနဲ့ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အကောင့်တွေကို အတိုးဆုချငွေ မပေးမိဘဲ active ဖြစ်တဲ့ အကောင့်တွေကိုသာပေးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။
သင်၏ အကောင့်ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ အကောင့် အဖြစ် အမှတ်အသားပြုလုပ်ရန် ဒါကို တစ်လ တစ်ကြိမ်ပဲ လုပ်ဖို့လိုပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ MYD အတွက် အတိုးငွေ လိုချင်တယ်လို့ ကျတော်တို့ကို ပြောရုံပါပဲ။
ဆိုလိုတာက သင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ address ကို 1 MYD ပို့ထားမယ်
သင့်မှာ 1000 MYD ရှိတယ် ဆိုပါစို့ ဒါဆို
သင်သည် လတိုင်း 10 MYD ရရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်မှာ 100000 MYD ရှိပြီး ရင်းနှီးထားတဲ့ address သို့ 1 MYD ပို့ထားပါက 1000 MYD လတိုင်းရနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဥ်တွင် ပါဝင်ရန် လိုအပ်ချက် ၂ ချက်သာရှိပါတယ်။
၁။ လတိုင်းရဲ့ ပထမနေ့မှာ သင့် MYD အကောင့်အတွင်း 500 MYD အထက် ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ လ မကုန်ခင် သင့် MYD အကောင့်ကနေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မည့် အကောင့်သို့ 1 MYD ပို့ပြီးသား ဖြစ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ အတိုးဆုချငွေ လွတ်သွားနိုင်တာကြောင့် လတိုင်းရဲ့ ပထမ ရက်တွေမှာ MYD အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ခြင်းကို သတိထားရန် လိုအပ်ပါတယ်။
1 MYD ထက်ပိုပို့ခြင်းက သင့်ရဲ့ ဆု ပမာဏ ကို တိုးစေမှာမဟုတ်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ မပို့ကြပါနှင့်။ ကျွန်တော်တို့လည်း မိတ်ဆွေကို 1MYD ထက်ပို၍ တောင်းမည် မဟုတ်ပါ။ ဤသို့ ပို၍တောင်းသူကလည်း scammer သာ ဖြစ်ပါတယ်။ 1MYD ထက် နည်း၍ ပေးပို့ခဲ့လျှင်လည်း သင်၏ ဆုလာဘ်ကို ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။
သင့်တို့ရဲ့ ပထမဆုံး ဆုလာဘ်ပေးအပ်ခြင်းကို နိုဝင်ဘာ 1 ရက်နေ့မှာ လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်
Hey everyone, we have an exciting announcement today. We are implementingaMYD staking rewards system to reward everyone who is holding MYD. Every month you will earn MYD staking rewards based off 1% of your accounts current value. This means you can earn 12% MYD interest per year.
As an additionalacelebration of releasing MYD staking at the end of this month we will be providingaone-time 3% staking bonus to everyone that participates in the first month of MYD staking!
MYD Staking pays out once per month on the 1st day of the month to everyone that has an active MYD account that is participating in the Staking program. To participate in the staking and mark your account as active all you have to do is send 1 MYD to this address in the weeks before the staking rewards are send, so anytime between the 2nd and the end of the month. This is so we don't send staking rewards to lost accounts and only to our active users. You need to do this once every month to keep marking your MYD account as staked and to tell us you want staking rewards!
This means if send 1 MYD to the staking address and you have 1000 MYD, you will be sent 10 MYD each month. If you have 100,000 MYD and send 1 MYD to the staking address, you will be sent 1000 MYD each month.
The only2requirements for this are:
- Your MYD account needs to have over 500 MYD on the 1st of the month.
- Your MYD account needs to have sent 1 MYD to the staking account in the last month.
Be careful selling and buying MYD on the 1st of the month as you may miss out of your staking reward.
Please do not send more than 1 MYD, as it will not increase your rewards. We will never ask you to send more than 1 MYD, anyone doing so isascammer. Sending less than 1 MYD will not give you rewards.
Your first set of rewards will be processed on the 1st of November!
Last month 19,232,442 MYD was staked from 575 accounts.
This means the total staking rewards being sent out this month is 192,324 MYD.
To stake your MYD and earn monthly rewards, please send 1 MYD each month to this address:
Last month 12,711,604 MYD was staked from 701 accounts.
This means the total staking rewards being sent out this month at 5.0% is 635,580 MYD.
Last month 15,789,200 MYD was staked from 866 accounts.
This means the total staking rewards being sent out this month at 3.0% is 473,676 MYD.
You can now send to stake for next month